Fikarohana momba ny firaisana Fanorenana ny fanahy amin'ny tontolon'ny fanahy amin'ny fiovan'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny sehatry ny fanambadiana indray: Tantaram-piainana Tantaram-piainan'ny L. Ennuyer | N. Jegou - Fikarohana momba ny firaisana amin'ny vatana
Lionel Ennuyer dia maty tamin'ny fiaramanidina
Lionel Ennuyer dia teraka tamin'ny 22 aogositra 1953 tao amin'ny tanàna ambanivohitra Paris, France. Ny renin'i Lionel dia Yvonne Ennuyer ary ny rahavaviny dia Vivian no anarany. Lionel dia zazalahy be fitiavana izay tena sariaka, tia olona ary nalala-tanana. Malala-tanana tokoa izy ka vitsy ny fananany, satria nomeny ny hafa ny fananany. Tiany ny fanatanjahan-tena ary nandray anjara tamin'ny skating, ski, tennis, nilomano, fitifirana ary bisikileta izy. Yoyo no anarany anarany.
Toy ny tovolahy dia nividy moto i Lionel. Tamin'ny volana Desambra, 23 1973, fony izy 20 taona, dia nandeha fiara fitateram-bahoaka niaraka tamin'ireo namana nanaraka azy tao anaty fiara. Tsy naharesy ny bisikiletany intsony izy ary nianjera tany amin'ny banky teo amoron-dalana, namely ny lohany ary maty teo amin'ny sehatra.
Yvonne, reniny, dia niahiahy fa ny naman'i Lionel tao amin'ny fiara dia nanan-kery tamin'ilay loza, angamba nanara-maso akaiky an'i Lionel akaiky sy nahatonga ilay loza. Tsy misy na iza na iza namany ao anaty fiara anefa no manaiky izany.
Reincarnation, Plan of Soul and Change Gender: Lionel Reincarnates amin'ny maha zanakavavin'ny rahavaviny azy ary mahatadidy ny fianjerana moto
Teraka tamin'ny 30 Desambra 1974 i Nadege, efa ho herintaona katroka taorian'ny nahafatesan'i Lionel. Ny ray aman-drenin'i Nadege dia i Patrick sy Vivian Jegou; Vivian dia rahavavin'i Lionel. Nadege dia nomen'ny ray aman-dreniny anaram-bosotra Nana.
Amin'ny maha-zaza azy, Nadege dia nanomboka niresaka momba ny lozam-piaramanidin'i Lionel toy ny nitranga taminy. Nolazainy fa ny namany, izay nitondra ilay fiara tao ambadiky ny reniny, dia namely ny lamosin'ny môtô, izay nahatonga azy tsy hanana fanaraha-maso sy lozam-pifamoivoizana. Nadege (nitranga in-1): Nadege dia nitantara ny zava-nitranga tamin'ilay fianjerana tamim-pahatsoram-po indray i Nadege ary toa nanenika ilay hetsika izy.
Rehefa i Xadex taona Nadege dia Yvonne, renibeny ary renin'i Lionel sy Vivian, dia nampiseho an'i Nadege ny sarin'i Lionel. Nilaza i Yvonne fa avy amin'i Yoyo ilay sary, izay anarana i Lionel. Nady tsy nanaiky i Nadege ary nanizingizina fa sarin'ny azy izany. Nadege dia nampiasa ny anarany manokana, Nana, milaza hoe:
"Tsia, Nana." (1)
Rehefa naseho an'i Lionel ny sarin'i Lionel tamin'ny fotoana iray hafa, dia nanitrikitrika ihany koa i Nadege fa sary tena izy izany.
Nadege dia mahatadidy ny Carambars taloha, ny licorice Rolls ary ny lokon'ny lobatr'i Lionel
Raha i Nadege dia 4 taona, dia nanana fahatsiarovana iray hafa momba ny fiainany tahaka an'i Lionel izy. Tsy nampoizina fa hoy i Nadege tamin'i Yvonne, renibeny:
"Raha izaho dia Lionel no nividy karambara." (2)
Nadege avy eo fa tsy fantany hoe inona ny karambar. Nanontany azy avy eo i Yvonne,
"Inona moa ny karambaro?" (3)
Nanazava i Yvonne fa ilay teny dia niresaka momba ny vatomamy karamiela. Tena tiany ny safidin'i Lionel, saingy tsy mbola nividy zavatra ho an'i Nadege i Yvonne. Taorian'io fanazavana io, hoy i Nadege:
"Nividy zavatra mainty hoditra koa aho tamin'ny mamanay." (4)
Yvonne nanamafy fa marina io fanambarana io. Yvonne dia tia ravinkazo, izay vatomamy mainty misy vatomamy fotsy. Tena i Lionel tokoa no nanao an'io ankizivavy io.
Raha i Nadege dia 5 taona, dia nasehon'i Yvonne azy ny sary mainty sy fotsy an'i Lionel ho zazakely. Nijery ny sary i Nadege ary niteny hoe:
"Fantatrao, fony aho Yoyo, nanao akanjo fotsy marevaka aho." (5)
Satria sary fotsy maintso sy fotsy, tsy hita mazava ny lokon'ny embroidery, nefa i Nadege dia marina momba ny lokon'ny embroidery manga. Ity akanjo ity dia nanjavona ela be ary i Yvonne dia azony antoka fa tsy niresaka momba ny lobaka na ny lokony amin'i Nadege izy.
Tortoise Face sy fitondrantena hafa avy amin'ny fiainana taloha
Nisy zava-nitranga hafa tao amin'ny fiainan'i Lionel izay tsaroan'i Nadege, izay nisisika nanjo azy, fa tsy i Lionel. Nasehony koa ny fihetsika izay toa an'i Lionel.
Tia manintona endrika i Lionel, izay hanosika ny lantony ambany kokoa lavitra. Antsoiny hoe "tavy tortoise." Rehefa roa taona i Nadege no nanao an'io tarehy io, na dia tsy nisy nilaza taminy momba ny tavoahangin'i Lionel aza, na dia tsy nahita an'i Nadege aza ny sarin'ny Lionel manao ny tarehiny. Lionel sy Nadege no nanao ny tarehy matetika.
Rehefa nanoratra taratasy i Lionel, dia naka sodina tamim-pito setroka foana izy. Rehefa nasehon'i Yvonne indray ny santionany tamin'ny sari-tapitr'io fantsom-panafody io, dia noraisiny ny fahazàny, ary nanamboatra ny sodina tamina lalana mitovy amin'izany koa izy.
Tahaka an'i Lionel, Nadege dia olona malala-tanana ary nanome zavatra azy ho an'ny hafa, toy ny nataon'i Lionel. Tiany ihany koa ny fanatanjahantena, tahaka ny Lionel, indrindra ny fiaramanidina, ny milomano ary ny manidina. Tamin'ny taona 3 ½, Nadege dia tsy natahotra nidina tany amin'ny dobo iray avy amin'ny haavon'ny metro 10 na metatra 3, toy ny efa nataony teo aloha.
Reincarnation & Réglance ara-batana na fisehoana mitovy amin'izany
Yvonne, renin'i Lionel ary reniben'i Nadege, dia nieritreritra fa misy fitoviana eo amin'ny endrika misy eo amin'i Lionel sy i Nadege, satria samy nanana ny asymmetran'ny masony izy roa. Mampalahelo fa tsy misy sary azontsika jerena.
Ny tanjak'ity tranga ity dia miankina amin'ny fahatsiarovana tsy fahita firy nataon'i Nadege tamin'ny zava-nitranga tamin'ny fiainan'i Lionel, nanomboka tamin'ny fahatsiarovany tampoka ny lozam-pifamoivoizana izay namarana ny fiainany. Tsaroany an-tsitrapo ihany koa ny vatomamy carambar izay tian'i Lionel sy ny lokon'ny peta-kofehy ny lobatr'i Lionel, izay notafihiny fony izy mbola tanora. Raha ekena ity tranga teraka ao amin'ny vatana vaovao ity dia manana ireto manaraka ireto:
Fanomanana ny fanahy: Reincarnation an'ny fianakaviana iray ihany: Nadege dia teraka tamin'ny rahavavin'i Lionel, Vivian. Araka izany, hita fa nikasa ny hanana vatana vaovao indray i Lionel hiaraka amin'ny fianakaviany, ao anatin'izany ny reniny taloha, Yvonne, izay lasa renibeny ankehitriny.
Reincarnation & Change of Gender: Lionel indray miorina ho Nadege, vehivavy. Na dia teo aza ny fiovan'ny lahy sy vavy, Lionel sy Nadege dia naneho fihetsika iombonana, toy ny fahalalahan-tanana sy fitiavana fanatanjahan-tena.
Fitoviana ara-batana: Yvonne, renin'i Lionel sy ny renibeny Nadege, dia nahatsikaritra ny fitoviana teo amin'i Lionel sy Nadege momba ny asymmetria amin'ny masony. Mazava ho azy fa ity tranga iray ity ihany no mety ho vokatry ny fototarazo.
1. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 95
2. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 95
3. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 96
4. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 96
5. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 96